के ट्रम्पले अझै पनि चुनावमा जित हासिल गर्न सक्छन् ?
विराटनगर, २० कात्तिक । ट्रम्पले विस्कनसिन, जर्जिय, पेन्सिलिभानिया र मिसिगन जस्ता महत्वपूर्ण राज्यहरुमा आफ्नो चुनावी अभियान चलाएका थिए । उक्त राज्यमा भइरहेको मतगणनाका परिणामहरु ट्रम्पको जितका लागि चुनौती भइरहको छ । बीबीसीका अनुसार मिसिगनमाजो बाइडेनले जित हासिल गरिसकेका छन् । युएस मिडियाले गरेको आँकलनअनुसार बाइडेनले विस्किनसनमा पनि जित हासिल गर्नेछन् । त्यसैगरी पेन्सिलिभानियामा पनि अपेक्षाकृत मत ट्रम्पले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
यी तीनवटै राज्यको मतपरिणामले बाइडेनलाई जित प्रदान गर्नेछ । डेमोक्र्याटिकका उम्मेदवार जो बाइडेनले आफूले जित हासिल गरिसकेको घोषणा गर्न छाडेका छन्, तर उनले भने कि ट्रम्पलाई पराजित गर्ने कुरामा विश्वस्त रहेका छु ।
बाइडेनले ७ करोड ५० लाख मतदाताको समर्थन पाएका थिए जुन संख्या अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रपति उम्मेदवारले पाएका थिएनन् । २०१६ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पले ६ करोड ७२ लाख मत प्राप्त गरेका थिए ।
यस निर्वाचनको तीतो अनुभव कोरोना भाइरस महामारीले भरिएको थियो । निर्वाचनको मितिसम्म प्रत्येक दिन १ लाख ३ हजारभन्दा बढी मानिसहरु संक्रमित भइरहेको तथ्याङ्क अमेरिकी कोभिड ट्रयाकिङ प्रोजेक्टले देखाएको थियो । ट्रम्पले हाल प्राप्त गरेको मत परिणाममा कोभिड १९ संक्रमणले ठूलो प्रभाव पारेको छ । उनले यसको नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको र पूर्ण असफल भएको अभियोग लागेको थियो ।
ट्रम्पले चुनाव जित्ने सम्भावना अझै पनि छ ?
बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचन जित हात पार्ने दौडको नजिक पुगेको छन् । उनलाई विजय प्राप्त गर्नका लागि २७० इलेक्टोरेल मतको आवश्यकता पर्दछ जुन मतले ह्वाइट हाउस पुर्‍याउने छ । हालसम्म डेमोक्र्याटिकको २४३ इलेक्टोरेल मत प्राप्त गरेको छ भने रिपब्लिकले २१४ इलेक्टोरल मत ।
अमेरिकी चुनावमा राष्ट्रियरुपमा भन्दा पनि राज्यस्तरबाट मतदान प्राप्त गर्दछन् । हरेक राज्यले त्यहाँको जनसंख्याका आधारमा निश्चित संख्यमा इलेक्टोरल कलेज मत प्राप्त गर्नेछन् र सबै राज्यको मिलाएर कुल ५३८ इलेक्टोरेल कलेज मत संख्या रहेको हुन्छ । यदि ट्रम्पले १० इलेक्टोरेल भोट ल्याएर विस्किनसनमा हारे भने, उनले जर्जियामा १६, नर्थ क्यारोलिनामा १५, पेन्सिलिभानियामा २० र एरिजोनावा नेभाडामा ११ वा ६ इलेक्टोरेल मत प्राप्त गरी विजय हुनुपर्ने हुन्छ ।
जर्जियाको अधिकारीले भने कि हामीले रातभरि मतगणना गर्‍यौं तर मध्यरातसम्म ९० हजार भोटमात्र गन्न सक्यौं । उक्त समयमा ३१ हजार मतसहित ट्रम्पले लिड गरिरहेका थिए ।
यसरी एरिजोनामा पनि मतगणना जारी छ । यसरी हालसम्म भएको मतगणनामा जो बाइडेनले ८० हजार मत प्राप्त गरिसकेका छन् । सीबीएसका अनुसार उक्त स्थानमा बाइडेनले बाजी मार्ने सम्भावना रहेको छ ।
त्यसैगरी नेभाडा र फिलाडेल्फियामा मतगणना सक्न धेरै दिन लाग्नसक्ने निर्वाचन अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।